अधिकांश मानिसहरू निराश अपेक्षाकृत हालै समाज बीच साधारण छ भन्ने सोचाइ गर्छन। पुरातन समयमा समेत मान्छे यस्तै लक्षण भोगे हुनाले यस्तो राय, गलत छ। मात्र फरक तिनीहरूले रोग निराशा र melancholy छ भनिन्छ छ।
यो रोग गम्भीर मानसिक विकार सक्छ रूपमा, सूचना र निराशा पहिचान गर्न महत्त्वपूर्ण छ। तपाईंले कसरी निराश मुड संग कहिले काँही भ्रमित हुन किनभने वा गर्न सक्छन् राम्रो महसुस छैन, तपाईं निराशा छ कि थाहा छ? अवसाद अक्सर कारण गंभीर वा लामो समयसम्म तनाव, अत्यधिक emotionality र भावना मानिसहरूलाई हुन्छ। यद्यपि, केही लागि निराशा को लक्षण पहिचान गर्न सकिन्छ?
अवसाद को लक्षण
अवसाद को पहिलो शुरू भएको मानव भावना संग सम्बन्धित छ। सबै तिनीहरू व्यक्तिगत प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ। केही मानिसहरू चिन्ता, पूर्ण आनन्दित भावना गायब को कुनै पनि घटना मा निराशावादी दृष्टिकोण देखा महसुस गर्छन। निराश र कम आत्म-सम्मान को एक गहिरो अर्थमा अनुभव गर्न भनेर राज्य केही peculiar।
एक व्यक्तिले आफ्नो व्यवहार, उदास भनेर कसरी थाहा छ? हराएको एकाग्रता, मोटर निषेध, पार्थक्य र असमाजिक छ। त्यहाँ एकान्त, बानी, केही अवस्थामा, लागूपदार्थ गर्न लत प्रेम छ।
अवसाद अर्को लक्षण मानव सोचाइ परिवर्तन भनिन्छ गर्न सकिन्छ। जीवन र पछिल्लो गतिविधिमा सबै चासो गुमाए, त्यहाँ अक्सर आफ्नै uselessness को, उहाँले आफ्नो उपस्थिति बोझबाट प्रेम लाग्यो छन् उहाँले चाहन्थे थिएन कि।
कसरी निराशा शारीरिक manifestations सुरु भनेर बुझ्न? यो निद्रामा विकार र अनिद्रा घटना मा प्रकट भएको छ, जीवनको सामान्य ताल गुमाए। एक व्यक्ति कि छ, रात मा, या निद्रामा उहाँलाई धेरै लेट आउँछ, यो आवश्यक छ जब सुत्न चाहन्छु गर्दैन। अन्ततः थकान चाँडै यो मानसिक जस्तै साथै व्यायाम समयमा पनि नगण्य देखिन्छ।
प्रमुख कारक र निराशा को प्रकारका
मुख्य कारक, जसमा निराशा सम्भावित शुरू भएको कारण मस्तिष्क कठोर तनाव गर्न अत्यधिक लोड छ। यसलाई उदाहरणका लागि, कुनै पनि psychosocial कारक हुन सक्छ, आधारित छ। अवसाद प्रतिक्रियाशील निराशा भनिन्छ कि यस पृष्ठभूमिमा विरुद्ध खडा। तपाईं निराश भनेर कसरी थाहा छ? दुई हप्ता को एक न्यूनतम र को लागि एक व्यक्ति अवसाद को थप दुई लक्षण छन् भने, यो पहिले नै विशेषज्ञ गर्न सान्दर्भिक लागि कारण छ।
अवसाद रोग खुलारूपमा र अवधि निर्भर यसको आधारभूत प्रकारका द्वारा प्रतिष्ठित। प्रतिरोधी निराशा अवसाद को फारम जसमा antidepressants को पछि दुई उपस्थित पाठ्यक्रम पूरा रिकभरी वा क्लिनिकल प्रभाव भाग मा हासिल छैन आउँछन् भनिन्छ।
Atypical निराशा मात्र मुख्य लक्षण प्रकट भएको छ, तर पनि शरीरको वजन मा वृद्धि सँगसँगै, ठूलो सुस्ती, तथाकथित "क्रूर" भोक र भावनात्मक जवाब। Postnatal निराशा महिलाहरु मा प्रसब पछि उत्पन्न हुन सक्छ। क्षणिक आवर्तक फारम यति किनभने यसको अवधि को नाम छ। त्यस्ता मानिसहरूलाई एक महिना बारेमा एक पटक वा दुई पटक रोग लक्षण गर्न निराशा निहित अनुभव संग, तिनीहरूले एक वा कम सप्ताह बारेमा पछिल्लो गर्न सक्नुहुन्छ।
अवसाद को स्त्री फारम
अक्सर तपाईं महिला शरीर प्राय पुरुषहरु भन्दा उदास उजागर छ कि जानकारी भेट हुन सक्छ। साथै, पुरुष र महिला रोग घटना विभिन्न लक्षण पालन गर्न सक्नुहुन्छ। प्रश्न कसरी तपाईं अवसाद भनेर थाहा छैन, धेरै महिला दुख्छ छ। मात्र लक्षण देखा विश्लेषण गर्न आवश्यक छ। को fairer लिंग अक्सर मौसमी निराशा प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ। यो समयमा तिनीहरूले प्रकाश चिकित्सा, मालिश, र यति मा लागि उपयोगी हुनेछ। डी साथै, महिला यस्तो पाचन, हर्मोन परिवर्तन, फिक्री र क्रोनिक दुखाइ को exacerbation डर रूपमा लक्षण अनुभव गर्छन।
मानिसहरू मा, अवसाद को लक्षण एकदम फरक हुन सक्छ। "म कसरी थाह म निराश छन् भने?" - तिनीहरूले रुचि राख्नुहुन्छ। पहिले, यो निराश भावनात्मक राज्य, स्पष्ट कारण बिना अरूलाई हुन सक्छ यसरी एक स्पष्ट कम आत्म-सम्मान छ, spontaneously र एकदम जोडले देखिन्छ। फलस्वरूप, तपाईं रक्सी वा केही psychotropic लागूपदार्थको लागि तरस प्राप्त गर्न सक्छ।
गहिरो र दीर्घकालीन निराशा को संकेत
केही विरामीहरु को संकेत देखाउन सक्छ गहिरो अवसाद। ताकि तपाईंले निराशा छ कि कसरी थाहा छ? त्यस्ता मानिसहरूलाई तिनीहरूले तिनीहरू एक भारी दुःख अनुभव जीवनमा चासो गुमाए, utterly बेकारी र अनावश्यक लाग्छ। तर यो सबै, भाग्यवस, चिकित्सा लागूपदार्थ द्वारा उपचार गरिएको छ। समय गहिरो अवसाद निर्मूल गर्दैन भने, यो पुरानो मा विकास गर्न सक्नुहुन्छ। रोग को संकेत धेरै वर्ष को लागि नै प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ:
दुःख, जीवन को निराशावादी मुड को भावना;
निद्रामा विकार को लक्षण, र कहिलेकाहीं आंशिक वा पूर्ण अभाव;
painkillers लिएर पछि बन्द छैन भनेर टाउको दुखाइ,
जोडों र मांसपेशीमा, कमजोरी को भावना मा बारम्बार दुखाइ;
सम्पूर्ण पाचन प्रणालीको गिरावट।
पुरानो निराशा आवश्यक प्रदर्शन गर्न रगत serotonin को स्तर वृद्धि गर्न सक्षम छ जो एक विशेष आहार, संग संयोजन मा चिकित्सा उपचार संग उपचार गर्नुपर्छ। यो हर्मोन आनन्द को हर्मोन पनि भनिन्छ बनाइन्छ।
तर पुरानो झन् खराब निराशा लुकेका फारम हुन सक्छ। र यो कसरी चिन्न, तपाईं कसरी निराशा के बुझ्न? नियम, सबै विरामीहरु तुरुन्तै मद्दत एक डाक्टर देखि, तिनीहरू केवल थकित थिए सोच खोज्छन्। तर पछि सबै नै निराशा को विशेषता लक्षण बाहिर फेला (शरीर को विभिन्न भागहरु मा दुखाइ, भोक र वजन को हानि, विचलित निद्रामा र libido घट्यो)। रोग को latent फारम संग व्यक्ति लगातार टाउको दुखाइ, मांसपेशी वा हड्डी, उहाँले सधैं बेचैन र भयातुर छ जस्तो देखिन्छ, र यति मा महसुस हुन सक्छ। डी latent अवसाद को उपचार को सबै भन्दा लोकप्रिय विधि चिकित्सा मानिन्छ।
किशोर अवसाद को लक्षण
दुर्भाग्यवश, अवसाद रूपमा यस्तो रोग, पनि किशोरीहरूको ग्रस्त हुन सक्छ, र कारण धेरै हुन सक्छ। यो र साथीहरू, भावशून्यता र आफ्नो आमाबाबुको समझ को कमी को आफ्नो कमी, कहिलेकाहीं एक बच्चाको मनोवैज्ञानिक दुरुपयोग सम्म पुगन। किशोर अवसाद को कारण हर्मोन परिवर्तन वा कम आत्म-सम्मान आफ्नो शरीर गर्न विद्यालय वा घृणा मा खराब प्रदर्शन कारण हुन सक्छ।
कसरी भनेर बुझ्न पनि किशोर निराशा उहाँले सहयोगको आवश्यक र? पहिलो, भोक, त्यहाँ टाउको दुखाइ सँगसँगै छ जो, र प्रतिरक्षा कमजोर एक टूटने छ। को किशोरी निद्रामा वा निदाउरोपनको अभाव थाल्छ। निरन्तर, रो सक्नुहुन्छ मनमा सबै कुरा लिन आफ्नै uselessness कुरा, यो बन्द असमाजिक जीवनशैली गर्न थाल्छ।
अवसाद देखि बच्चा बचत गर्न आवश्यक मद्दत बच्चा मनोचिकित्सक। यो आत्म-सम्मान बलियो बनाउन, आफ्नो कारण पत्ता लगाउन मद्दत गर्नेछ। अवसाद को नम्र प्रकारका उपचार को लागि रोग शुरू भएको छ कारण जो कारण एक शान्त जडिबुटी र उन्मूलन गर्न आवश्यक पर्दछ। आमाबाबु हो, बारी मा, सम्बन्ध, एक बच्चाको रूपमा सुधार, र प्रत्येक अन्य संग गर्नुपर्छ।
Antidepressants दुर्लभ अवस्थामा अवसाद को उपचार मा बच्चाहरु सल्लाह दिन्छन्। तिनीहरूले झन् वयस्क लागि निर्धारित छन्। गंभीर अवसाद को उपचार को लागि वयस्क मनोचिकित्सा संग संयुक्त दबाइ उपचार गर्ने सल्लाह दिन्छन् सक्छ। व्यायाम, केही अवस्थामा, उपचार सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। अवसाद को व्यक्तिगत अवस्थामा संगीत चिकित्सा, नृत्य चिकित्सा, एरोमाथेरापी, चुम्बक र टी संग उपचार मा। डी
राज्य बोर्डर। क्लिनिक सीमाना अमेरिका
बाल्यकाल पागलपन: लक्षण र उपचार
अवसाद भनेको हो र यसलाई कसरी व्यवहार गर्ने?
कि पागलपन पूर्ण उपचार छ? पागलपन लागि परीक्षण। मनोरोग
नाक को साधारण संक्रामक रोगहरु
एक प्रारम्भिक चरण मा क्षयरोगका लक्षण। एक प्रारम्भिक चरण मा क्षयरोग
को जाडो लागि मकै कसरी स्थिर गर्ने। विधि र सिफारिसहरू